Vaovao - Masinina Miaraka amin'ny Teknolojia Vaovao ho an'ny fiara mitondra fiara
Masinina miaraka amin'ny teknolojia vaovao ho an'ny fiara mitondra fiara
Ireo axles misy kodiarana amin'ny lafiny roa amin'ny vodilanitra (frame) dia antsoina hoe axles automobile, ary ny axles misy fahaiza-mamily dia matetika antsoina hoe axles. Ny tena maha samy hafa azy roa dia ny hoe misy drive eo afovoan'ny axle (axle). Amin'ity taratasy ity, ny fiaran'ny fiara miaraka amin'ny tarika familiana dia antsoina hoe axle automobile, ary ny fiara tsy misy kapila dia antsoina hoe axle automobile hanehoana ny tsy fitovizany.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana lozisialy sy fitaterana, miharihary miha miharihary ny fahambonian'ny axles fiara, indrindra ny trailer sy semi-trailer, amin'ny fitaterana matihanina sy ny hetsika manokana, ary nitombo be ny filan'ny tsena.
Ity teknolojia ity dia manadihady ny fizotran'ny famolavolana ny axle, manantena ny hanampy ny mpanjifa hisafidy milina CNC mety kokoa.
Ny fizotry ny famokarana vaovao an'ny axle ankapobeny amin'ny fiara:
Avy amin'ny fizotry ny famokarana vaovao, ny milina fikosoham-bary ampiasaina amin'ny milina (axe solid) na milina mankaleo indroa (axe hollow) miampy CNC lathe, fikosoham-bary OP1 nentim-paharazana, OP2, OP3 fihodinana, ary na ny fandavahana sy ny fikosohan OP5 azo soloina aza amin'ny alàlan'ny latheva CNC latina OP1 avo lenta.
Ho an'ny famaky matanjaka izay tsy ilana famonoana ny savaivon'ny hazo, ny atiny famokarana rehetra dia azo tanterahina ao anaty fananganana iray, ao anatin'izany ny fantson-tsivily famaranana sy ny lavaka famohana. Ho an'ny famaky poakaty izay tsy ilain'ny famonoana ny savaivony, dia azo tanterahina ao amin'ny fitaovan'ny milina ny fenitra fametahana ho azy, ary ny votoatin'ny masinina dia mety ho vita amin'ny alàlan'ny fitaovana milina iray.
Safidio ny lathes cnc axe spéciale ho an'ny masinina mba hampihenany ny zotram-pamokarana ary hampihena ny karazana sy ny fatran'ny fitaovana milina voafantina.
Ny tombony sy ny mampiavaka ny milina fifantina dingana vaovao:
1) Ny fifantohana amin'ny fizotrany, ny fampihenana ny fotoanan'ny fikikisana ny sangan'asa, ny fampihenana ny fotoana fanodinana fanampiana, ny fampiasana ny teknolojia fanodinana miaraka amin'ny lafiny roa, nohatsaraina betsaka ny fahombiazan'ny famokarana.
2) Ny fametahana indray mandeha, ny fanodinana miaraka amin'ny lafiny roa dia manatsara ny fahamendrehan'ny machining sy ny fihenan'ny axe.
3) Fohy ny fizotry ny famokarana, ahena ny isan'ny fizarana ao amin'ny tranokala famokarana, manatsara ny fahombiazan'ny fampiasana ny tranokala, ary manampy amin'ny fanatsarana ny fandaminana sy ny fitantanana ny famokarana.
4) Noho ny fampiasana fitaovana fanodinana haingam-pandeha dia azo ampitaina amin'ny fitaovana fampidinana sy famoahana entana ary fitaovan'ny fitehirizana mba hahazoana famokarana mandeha ho azy tanteraka sy hampihena ny vidin'ny asa.
5) Ny entana dia mikatona amin'ny toeran'ny mpanelanelana, azo antoka ny clamping, ary ampy ny tsela ilaina amin'ny fanapahana ny fitaovana milina, ary azo tanterahina ny fihodinana lehibe.
6) Ny fitaovan'ny milina dia azo ampitaina amin'ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy, indrindra ho an'ny famaky lava, izay afaka miantoka ny hatevin'ny fanamiana aorian'ny milina.
7) Ho an'ny famaky lava, rehefa vita ny lavaka anatiny amin'ny faran'ny roa ny sezista OP1, ny mpanjifa nentim-paharazana dia hampiasa faran'ny iray hampiakarana ny fametahana ary ny ilany kosa hampiasa ny tailstock hanamafisana ny sanganasa hiodina, fa ny haben'ny hafa ny lavaka anatiny. Ho an'ny lavaka anatiny kely kokoa dia tsy ampy ny fihenjanana henjana, tsy ampy ny tady fanamafisana ambony, ary tsy azo vitaina ny fanapahana mahomby .。
Ho an'ny lathe face roa sosona vaovao, ny famaky lava, rehefa vita ny lavaka anatiny ao amin'ny faran'ny roa amin'ny fiara, dia manodina ny fomba fametahana azy ny masinina: ny faran'ny roa dia ampiasaina hanamafisana ny sangan'asa, ary ny fiara afovoany kosa mampidina ny sangan'asa mampita torque.
8) Ny lohan-doha miaraka amina akorandriaka vita amin'ny hidy hydraulic dia azo afindra amin'ny làlan'ny Z an'ny masinina. Ny mpanjifa dia afaka mitazona ny toerana ao amin'ny fantsom-by afovoany (fantsom-bokatra boribory), ny toeran'ny lovia eo ambany ary ny toeran'ny savaivon'ny zana raha ilaina izany.
Raha jerena ny toe-javatra etsy ambony, ny fampiasana ny lathes CNC indroa miverina amin'ny famaky fiara dia manana tombony lehibe noho ny fizotran'ny nentim-paharazana. Teknolojia famokarana mandroso izy io izay afaka manolo ny fitaovana milina nentim-paharazana amin'ny resaka famokarana sy ny rafitry ny milina.